အကြောင်းအရာပေးပို့မော်ကွန်းတိုက်3၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery (စာမျက်နှာ 3)
စားသုံးသူများယနေ့မိမိတို့၏သွားလာရင်းမှသတင်းကိုချိုးဖောက်ဘို့ချန်နယ်အဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ ပို. ပို. လှည့်နေကြပါတယ်။ သတင်းနောက်ဆုံးတော့ TV ပေါ်မှာထုတ်လွှင့သည့်အခါမကြာခဏမထက်, စားသုံးသူပြီးသားထိုကဲ့သို့သော Facebook မှတိုက်ရိုက်, Twitter နဲ့ IGTV အဖြစ်လူမှုရေးလိုင်းများ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ဇာတ်လမ်းပါဝငျသောအရာကိုအကြောင်းကိုသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ထစေပြီ။ သာပေါ်သတင်းပို့ဖို့အသုံးပြုရိုးရာထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကို ...